VPN paLinux inogona kubiwa nenjodzi nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Kushushikana kutsva kwakawanikwa muLinux izvo zvichangobva kuitika zvekuti tsananguro yacho haisati yaverengerwa. Ndezve iyo CVE-2019-14899, njodzi inogona kubvumira vashandisi vane huipi kubira VPN kubatana. Kunyangwe vazhinji vezvenhau vachitaura nezve kukanganisa kwekuchengetedza kunokanganisa Linux, chokwadi ndechekuti zvinokanganisawo mamwe masisitimu anoshanda eUnix, senge FreeBSD uye OpenBSD. Rondedzero yacho haitauri nezveMacOS aApple, asi ivo vazivisa kambani yeCupertino kutora danho.
Iyo yakasarudzika rondedzero yeanokanganisa masisitimu, iyo yaunayo iwe mushure mekubira, inosanganisira chete diki diki reanoshanda masisitimu. Asi, tichifunga zvinoonekwa mune iyi runyorwa, tinogona kutaura kuti kunetseka kunokanganisa vazhinji vevashandisi veLinux. Nhau dzakanaka ndedzekuti makambani akanganiswa seLinux kernel chengetedzo timu, Google, Apple, Systemd, WireGuard, uye OpenVPN, vatove vakaudzwa nezve bug uye sekunyorwa uku vanofanira kunge vatove kushanda pachigamba kuti vazvigadzirise.
VPN kutadza kunokanganisa masisitimu anoshanda, pakati pevamwe
Linux isina (runit)
Uku kutyora kwekuchengetedza kunobvumira anorwisa ari padandemutande anoziva kana mumwe mushandisi akabatana kune imwechete server vpn. Iye anorwisa anogona zvakare kuona kana mushandisi akabatanidzwa kune imwe webhusaiti kana kwete. Uye zvakare, ivo vanogona kuona iwo chaiwo akateedzana uye nhamba dzinozivikanwa. Mushure meizvozvo vanoongorora kutumirwa kwepaketi, iyo inotungamira kune jekiseni re data uye pakupedzisira kubatanidza kubiwa.
Kuti tizvidzivirire kubva pakurwiswa kunogona kuitika, chatinofanira kuita ndechekuti gonesa reverse nzira kusefa uchishandisa bogon kusefa. Kune rimwe divi, zvakafanirawo chengeta ziso kunze kwekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa inopihwa neyedu yekushandisa sisitimu uye isai ivo nekukurumidza pavanenge vagadzirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kutsva kutsva kunogona kubvuta VPN kubatana muLinux
Kubvira riiniko kune kwakawanda kusagadzikana uye matambudziko ekuchengetedza muLinux? Imwe nguva yapfuura handina kumboona zvinyorwa zvine chekuita nenyaya dzekuchengetedza.
Idzo nhau muLinux nekuti chinhu chisingawanzoitika.
Pazvinhu zvakasiyana siyana zvekuparadzira kunze uko, zvinongorwisa izvo zvishoma uye zvinogona kugadziriswa.
MuWindows hachisi chinhu chitsva, nekuti inogara iine matambudziko uye isu hatigone kuagadzirisa, isu tinofanirwa kumirira zvigamba uye zvigadziriso zvinogadzirisa chinhu chimwe uye zvinokuvadza 10.
Linux inogara iine matambudziko painogadziridza kune itsva vhezheni yeanoshanda system uye chimwe chinhu zvakare chinogara chichitadza, haisi nhau mumaforamu. Iwe unoshaya odhiyo, wifi, hapana chinongedzo ... kana chero chaunoda panguva iyoyo.